I-Snow View Cottages - iCedar Cottage - I-Airbnb
I-Snow View Cottages - iCedar Cottage
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguRashmi
Le yindlu ye-chalet efana ne-cottage, ekwi-100 yeemitha ukusuka kwindlela, ekupheleni kwehlathi eligciniweyo elijongene neentaba zekhephu, ngombono wazo zombini kuzo zonke iindawo zokuhlala. I-cottage yakhiwe ngamatye endabuko, udaka kunye neenkuni kunye nezinto zangaphakathi zanamhlanje. Le ndawo ivula indawo entle enemithi, apho ubani anokonwabela ukuba yedwa kunye nokuba kunye neentaka, ilanga nenyanga. Jabulela iimvula zemonsoon ngeefestile ezinkulu okanye ilanga lasebusika egadini.
Le ndlu yakhiwe ngesitayela semveli samatye kunye nodaka lodaka, kunye neendawo zangaphakathi zangoku kwaye ezifudumeleyo kwi-plaster yodaka ezindongeni kunye neesilingi zamaplanga kunye nemigangatho. Le cottage inesicwangciso esivulekileyo, kunye nendawo yokutyela, igeleza kwindawo yokuhlala kunye nezitebhisi zokhuni ezikhwela kwi-loft enkulu, ilungele abantwana kunye nabantu abatsha ukuba balale okanye banikezele. Izitebhisi ezintle ezenziwe ngamaplanga zihla ukuya kwigumbi lokulala, elinefestile ye-bay. Kukho amagumbi amabini okuhlamba, enye idityaniswe negumbi lokulala kunye nelinye kwigumbi eliphezulu.
Ipropathi ikumgama ohambahambayo wezinto eziluncedo ezifana neendawo zokutyela kunye neevenkile zegrosari, ukanti ikwindawo enemithi, kude netrafikhi, uhamba kakuhle ehlathini xa uphuma egadini.
Umbuki zindwendwe ngu- Rashmi
Andihlali kwipropathi kwaye kukho umnakekeli, uhlala evuya ukunceda kunye nokukhokela iindwendwe. Nangona singakuphakeli ukutya, indawo yokulala ixhotyiswe kakuhle ukuze iindwendwe zipheke, okanye umlindi unokulungiselela ukuphekela iindwendwe. Kufuneka ahlawulwe ngokuthe ngqo ngezi nkonzo.
Njengoko i-ridge ifumana iindwendwe ezivela kwihlabathi lonke, kukho iivenkile ezilungileyo ngaphakathi kohambo lwemizuzu eyi-10, ezithengisa ukutya kwe-Indian, kunye nokupheka kwentshona.
Kukho iindawo zokutyela ezikumgama wokuhamba, ezibonelela ngokutya kwaseIndiya nasentshona.
Umda ongasentla wepropati ugeleza ehlathini, udibanisa nawe kunye nendalo ngokuthe ngqo. Ungaya kuhambo oluhle ehlathini macala omabini, kunye nemibono emnandi yekhephu kunye nobomi basendle ngamaxesha athile.
Abaninizo nguRashmi Bharti noRajnish Jain, isibini esenze ezi ntaba ikhaya laso, yaye sihlala ezinye iikhilomitha ezili-100 kumntla-mpuma wale ndawo.
Andihlali kwipropathi kwaye kukho umnakekeli, uhlala evuya ukunceda kunye nokukhokela iindwendwe. Nangona singakuphakeli ukutya, indawo yokulala ixhotyiswe kakuhle ukuze iindwendwe…
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 12:00 - 17:00